Tsy afaka nihaona tamin’i Karen Hughes ilay bilaogera Saodiana nasaina nanatrika ny fivoriany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2018 5:53 GMT
Adihevitra marobe no nanodidina ny iraka nataon'ny ambasadera Karen Hughes, tale lefitry ny diplaomasiam-bahoaka sy ny raharaham-bahoaka ao amin'ny Departemanta Amerikana any Afovoany Atsinanana. Nilaza ny ankamaroan'ny fampahalalam-baovao Arabo fa tsy misy ilaina ny fitsidihana, satria tsy mino izy ireo fa afaka manatsara ny sarin'ny fitondrana Amerikana rava ao amin'ny faritra io vehivavy io.
“Toa tsy hadalana fotsiny izany fa tsy azo heverina fa mety hisy fiovana ao anatin'ny fotoana fohy”, hoy ny Arab News. Abdul-Rahman Al-Rashed, mpanao gazety Saodiana izay lazaina fa mpomba ny Amerikana, niantso an'i Hughes ho “mpanadio an'i George W. Bush ao amin'ny faritra Arabo.” Heveriny fa “mandiso fanantenana izy raha mieritreritra fa hino azy ny olona na hampiseho fahalianana amin'ireo asa tsara tanisainy”.
Rehefa avy nitsidika an'i Ejipta, nandeha tany Arabia Saodita i Hughes, ka nihaona tamin'ny mpanjaka Abdullah, Printsy Sultan, minisitra, manampahefana, mpianatra sy ny fianakaviany, ny manam-pahaizana, ary mpanao gazety. Nisy ny fivoriana enina samihafa, ary nolazaina ny Saodiana mba haneho ny heviny satria tsy manampahefana Amerikana ihany i Hughes, fa namana akaiky ny filoha izay atokisany sy henoiny.
Nasaina nanatrika ny iray tamin'ireo fivoriana ireo tao an-tranon'i Dr. Osama Angawi, manam-pahaizana Saodiana malaza any Jeddah ilay bilaogera Saodiana Fouad Al-Farhan. Ny antony manosika azy hanatrika ny fivoriana dia ny zavatra hitany tao amin'ny aterineto momba ny fifamatorana manokana teo amin'i Hughes sy Bush, ary satria “mahalana ny fahafahana mihaona amin'ny olona akaiky ny olona halako indrindra eto an-tany” hoy izy.
Gaga tamin'ny hamaroan'ireo vahiny i Al-Farhan, saingy tsy niraharaha izy satria nandeha tany mba hampita ny hafany. Na izany aza, tsy zakany ny fisian'ireo liberaly Saodiana sy vehivavy Saodiana marobe, ka niala ny fivoriana izy talohan'ny nanombohany. “Tsapako fa tsy afaka misolo tena ny fiarahamonina Saodiana ireo olona ireo”, hoy izy.
Tamin'ny faran'ny lahatsorany momba ny fihaonana, nilaza i Al-Farhan fa tsy fantany raha nandray fanapahan-kevitra tsara izy rehefa niala, ary nanontany ny mpamaky:hoe “Ahoana ny hevitrao?”